Admiral Faarax Qare”Biyaha Xeebaha Muqdisho waa sumeysan yihiin” | Awdalmedia.com
Admiral Faarax Qare”Biyaha Xeebaha Muqdisho waa sumeysan yihiin”
Sat 26 May 2018.
Admiral Faarax Axmed Cumar Qare Gudoomiyaha Hay’adda Cilmi baarista Badaha Soomaaliya Admiral Faarax Axmed Cumar ‘Faarax Qare’ ayaa sheegay in Xeebaha Muqdisho aanay wanaagsaneyn oo ay sumeysan yihiin.
Faarax Qare ayaa sheegay in ay baaritaan lagu sameeyay biyaha xeebaha Muqdisho laguna soo baaray sheybaar ku yaal dalka Kenya in ay ku ogaadeen in Biyaha Dekeda Muqdisho iyo Xeebaha ka agdhaw ay yihiin kuwa Sumeysan.
Qashinka ku daadiso Biyaha Soomaaliya oo kusoo caarisa iyo Dhiigga Xoolaha la qalo oo lagu shubo. “Maraakiibta qashinka ku daadisa biyaha Soomaaliya iyo dhiigga xoolaha la qalo oo lagu shubo ayaa kamid ah sababaha keenay sunta.”ayuu u sheegay Admiral Faarax Qare Radio Mustaqbal ee magaalada Muqdisho.
Admiral Faarax Qare waxa uu tilmaamay in Wasaqda Il ma aragtada ah ee ku jirta Biyaha ay u baahan qalab casri ah oo lagu baaro, balse aanan Hay’adoodu heysan, dhibaatada ugu weyn ee hortaalla ay tahay.
Admiral Faarax Qare waxa uuna sheegay in Sanaadiiq waa weyn oo ay ugu shakiyeen in ay sun ku jirto lagu daadiyay Xeebaha Soomaaliya.
Si gaar ah waxa uu sheegay in bartamihii Todobaadkii tagay in Kunteenarkii 25-aad lagu arkay Dekeda Ceel Macaan, Hirarka Biyaha ee dhufanaya ay Banaanka usoo saareen.
Madaxda Dowladda ayuu sheegay in ay kala hadleen sidii loo heli lahaa qalab casri ah oo lagula socda biyaha Soomaaliya, sidoo kalana lagu Baaro Badqabka Badda iyo Kheyraatka ku jira balse ay u sheegeen in ay bixinayaan lacagta, soona raadiyaan Qalabkaasi.
Gudoomiyaha Hay’adda Cilmi Baarista Badaha waxa uu tilmaamay in Sunta lagu duugay Badda Soomaaliya ay Hay’adda Bii’ada aduunka ay u sheegtay in Xeebaha Soomaaliya ay ka dilaaci karaan cuduro aanan la aqoon.
Xeebaha Soomaaliya waxaa lagu soo daadiyaa Haraadiga Warshadaha sida marar badan ay sheegtay Hay’adda Degaanka Aduunka ee loosoo gaabiyo (UNEP), waxaanan jirin qalab casri ah oo Dowladda federaalka kula socoto Maraakiibta Haamaha dhiga Biyaha Soomaaliya.